Codad dheeri ah oo ka soo horjeeda xagjirnimada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Codad dheeri ah oo ka soo horjeeda xagjirnimada
La daabacay tisdag 4 november 2014 kl 15.13
Waa in dhibaatooyinkan miiska la soo saaro
(8:09 min) (8:09 min)
Kulan ka dhacay aqalka umadda Rinkeby iyo sidii looga hor-tegi lahaa dhallinyarada u socdaasha dagaallada xag-jir-nimada. Sawirle: Kenadid Maxamed/Radio Sweden SR
Kulan fiidnimadii isniintii ina dhaaftay ka qabsoomay aqalka umadda ee xaafadda Rinkeby, kulankaasina oo abaabulkiisa uu ka dambeeyay ururka isu-tagga muslimiinta ee nawaaxiga Järva ayaa looga xaajoodey sidii gacan la isaga siin lahaa ka hor-tagga dhallin-yarada u safarta sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururrada xag-jirrada ee ka dagaalamma waddammo uu ka mid yahay dalka Suuriya.
Dhowaantan ayey ahayd kolkii ciidammada nabad-sugiddu ey kor u qaadeen tirada illaa iminka la xaqiijiyey ee u socdaashay sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururrada xag-jirrada. Tiradaasina oo la gaarsiiyey 90, halkii ey horey uga aheyd 85.
Dhallin-yarada u socdaasha Suuriya ayey waayadan dambe ka mid ahaayeen dhallin-yaro muwaadiniin soomaali iswiidhish ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa siyaabo kala duwan kulanka looga macneeyey sababta ku kalifta iney naftooda ku biimeeyaan iyo sidoo ey uga garab-dagaalami lahaayeen ururrada xag-jirka. Waana su'aal soo noqnoqtay muddadii labada saacadood ahayd ee kulanku socday. Cabdinuur Maxamed Ciise, gudoomiyaha ururka daladda ururrada Soomaaliyeed oo ey Radio Sweden laanta af-soomaaligu u suurtagshay inay wareeysi la yeelato ayaa saddex arrimmood ku macneeyey sababah ugu wacan:
Faqooqa dhallaanku sidoo kale bulshada bannaanka ka taagan yihiin bulshada ayuu isaguna ku macneeyay sababta ugu ballaaran ee ku kalifta dhallinyarada in la jah-wareeriyo oo duufsi lagu sameeyo, Iikar Cabdulqaadir oo muddo 20 sdannadood kor u dhaafeeysa ka mid ahaa saraakiisha xabsiyada ee dalkan Iswiidhish, oo goobtii kulanka ku sugnaa:
Mona Sahlin, oo muddo aan sidaa u dheereeyn ay dawladdii awoodda looga adkaaday u xil-saartay siyaasadda ka wacyi-gelinta dhallin-yarada qarka u saaran ama u socdaasha sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururrada xag-jirka, isla-markaana goob-joog kulanka ka ahayd ayaa la qabta Iikar Cabdulqaadir iney dhallin-yarada hayso rajo-la'aan iyo faqoonaan. Hase yeeshee aan mid keliya loo macneeyn karin sababaha ugu wacan in dhallin-yaradu socdaalaan:
- Jaawaab keliya ma lahan, hase yeeshee waxaa la oran karaa iney ka mideey-san yihiin in ey dhallin-yaradaasi dareen-san yihiin in bulshadu aaney arag, aaney siin xuquuqdoodii, aan laga difaacin cunsuriyadda iyo weliba argagaxa laga qabo muslimiinta, slamofobi-iigu aad u adag yahay, sida ay sheegtay.
Kulanka ka dhacay aqalka umadda ee Rinkeby fiid-nimadii isniintii ina dhaaftay ee saddexdii noveembar oo doodo fara badan la isku dhaafsaday ayaa muhiimadda laga lahaa ahayd sidii waayo-arag-nimo la isku dhaaf-san lahaa iyo sidoo kale sidii la isaga kaashan lahaa ka hor-tagga dhallin-yarada u socdaasha dagaalada xag-jir-nimada ku saleey-san. Ibraahim Buraale, hoggaamiyaha ururka daladda muslimiinta Järva oo kulanka goob-joog ka ahaa ayaa sheegay mar uu goobta ka hadlayey in dhankooda ey muhiimad ugu fadhido in xaafad ahaan loo soo daadego sidii wax looga qaban lahaa:
- Haddii aan taayada ka hadalno waxaan horayba u sheegay inaan ka hadalno nawaaxigeenna. Annaga oo weliba og-soon in su'aashani dfabeecad ahaan ay tahay mid aad u adag wax ka qabadkeedu, sida uu sheegay Ibraahim Buraale.
Haddaba sidii wax looga qaban lahaa xaaladdan ayaa u saleey-san laba garab. In guud ahaan loo baahan yahay qorshe qaran iyo in sidoo kale in la helo qorshe deegaan. Mona Sahlin, isu-duwaha dawladda ee wax ka qabadka arrimmahan oo howsha loo igmaday socon doonto muddo sannad iyo bar ah, ayaa ka jawaabtay su'aal ahayd tallaabooyinka ay rajeeneyso in qaado muddadaa. Waxayna tiri:
- Sannad iyo bar dabadeed waxaan rajeeyn inay jirto taageero dadyoowga ka towbad keena howlaha xag-jir-nimada. In la helo taageero qoyska u baahan gacan-qabad sidii looga caawin lahaa ceebaha iyo shaleeytida iyo cidda ey taageerada ka doonan karaan.
- Sidoo kale in ciidamadda ammaanka, macallimiinta, saraakiisha adeegga bulshada iyo bulshaduba ku dhiirato sidii looga hor-tegi lahaa xag-jir-nimada. Iyo in bulshadu inta maanta ka badan ay garwaaqsato in faqooqu yahay halis la mid ah midka xag-jir-nimada, sida ay sheegtay Mona Sahlin, isku-duwaha dawladda ee ka hor-tagga dhallin-yarada u socdaasha sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururrada xag-jirka ah.
Mona Sahlin ayaa muddadii uu kulankaasi socdey ku celcelisay in howshani tahay mid loo baahan yahay sidii la isaga kaashan lahaa dhammaan bulshada dalka ku dhaqan iyo gaar ahaan bulshada ku dhaqan ama ka howl-gasha nawaaxiga ey dhallaanku ka socdaalaan. Ururka daladda ururrada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah kooxaha gacanta ka geeysta ama looga fadhiyo inuu qayb baaxad leh ka qaato howshaa. Isagoona sheegay iney howlahaa wax kala qabtaan ururrada xubnaha ka ah nurur-daladeedka oo si dardar leh u bilaabey iney uga xaajoodaan.